Iyo Yakavimbiswa Neverland: Heano Pane 9 Eakanakisa Anime Kungofanana Neiyo! - Zvimwe
9 YeIye Akanaka Anime Senge 'Iyo Yakapikirwa Neverland' Unofanira Kuona
Yakavimbiswa Neverland inonzwa senge Darling MuFranxx zvese zvakare.
Darling MuFranxx aive nezvakawanda Hype kuseri kwayo muna 2018 sezvinoitwa Chipikirwa Neverland muna 2019.
Uye iyo hype inoita kunge inokodzera.
Saka kunyangwe hazvo ichiri 'kutanga' mazuva eanime akateedzana, heano mamwe akafanana mazano kana iwe wapedza nazvo.
Anime Seyakavimbiswa Neverland:
1. Owari Kwete Seraph
Owari Kwete Seraph ndeye madhimoni, mavampire uye nyika yevanhu vanoita zvavanogona kuti vazvidzivirire.
Mupfungwa iyoyo ndizvo zvakawanda senge Kurwisa PaTitan (yakafanana studio). Asi dzimwe pfungwa muOwari Kwete Seraph dzakada kufanana neIyo Yakapikirwa Neverland.
Ngatitorei muenzaniso waEmma naYuichiro Hyakuya.
Main vatambi kubva imwe neimwe akateedzana.
Mavara ese ari maviri inherera.
Yuichiro naEmma inguruve yenguruve.
Mavara ese ari maviri ane chinangwa chimwe mupfungwa: kutiza mutirongo.
Ose mavara ane 'zvishoma' zvakafanana muhunhu.
Emma na Yuichiro vanochengeta ROTA pamusoro pevamwe vanhu (vanonzwira tsitsi).
Uye vese protagonists vane chimwe chinhu chakafanana: nguo chena.
Chete Guinea nguruve pfekai seizvi… Mumusha wenherera.
Saka kunyangwe hazvo iwo maviri akateedzana achitora a zvakasiyana nzira munyaya, pane kufanana kwakasimba kunovasungira pamwechete.
Zvakakodzera: Iyo Yakanyanya Kukura Anime Inoratidza SaOwari Kwete Seraph
2. Higurashi: Kana Vachema
Kunge Akavimbiswa Neverland , Higurashi ari classic zvinotyisa zvakateedzana. Jam-yakazara nezvinhu zvisinganzwisisike zvekukwevera iwe mukati.
Higurashi ndeye zvese nezve musha weHinamizawa, kutukwa kwaOyashiro (mwari wemusha) uye njodzi dzakasungirirwa ku 'kuyedza kutiza' kubva kuHinamizawa.
Saka hapana chakasiyana neIyo Yakapikirwa Neverland, vanonyanya kutaurwa vanomanikidzwa kutevedzera mitemo. Kunyangwe paine chikonzero chakatosviba nezve nei zvakadaro.
Uku shanduko yakanaka kana iwe uchida anime nhevedzano iyo inotamba pane psychology yevatambi vayo, inokuchengetedza iwe kufungidzira, uye izere neanopenga mazinga echisimba.
akanakisa anime dubs enguva dzese
3. Rufu Chinyorwa
Rufu Ziva ndeye anime zvese nezve zano, maitiro, unzenza uye Shinigami pakati payo.
Kunze kwezviri pachena chokwadi senge Rufu Chidimbu chakazendamira zvakanyanya kudivi re 'kutuka', zano rechikamu rinotamba mushe neThe Promised Neverland.
Mushure mezvose - iyo Manga uye anime akateedzana anotora iyi nzira kuitira kuti nherera dzirarame, kuti vaone rimwe zuva.
Inoenderana: 30 Kufungidzira Kunodenha Makotesheni Kubva Kufa Chinyorwa
4. Chikoro Kurarama (Gakkou Gurashi)
Chikoro Kurarama chidimbu chehupenyu / chinotyisa akateedzana andisingambofi ndakakanganwa.
Yakagadzirwa naLerche, ivo vanonyanya kutaurwa vapukunyuki ve zombie apocalypse iyo inotanga kubuda.
Dambudziko ndere - ivo vakasungwa mukati mechikoro chavo uye kune vashoma chete vevapenyu vakasara. Nyika yekunze ndiyo kukambaira neZombies pakona dzese.
Chii chinoita kuti izvi zvifanane neiyo Yakavimbiswa Neverland iri zvepfungwa maficha acho.
Mumwe munhu anosangana nePTSD (chirwere chepfungwa) uye kunyengedza kuti ubatsire kutsungirira kunetseka.
Saka zvinodzika kupfuura iyo yemhando yemaficha inoda kuti iwe utende.
5. Kurwisa PaTitan
Yakagadzirwa neWIT Studios, Kurwisa PaTitan yakakurumbira kune chero munhu kuti arege hanya muindasitiri yeanime.
nhamba 1 anime nguva dzese
Zvakafanana naOwari Kwete Seraph uye Iyo Yakapikirwa Neverland, AOT inotanga iri nyore uye inotonhora. Mumwe nemumwe ane hunhu humwe 'hunotaura kunze' uye hunoda zvimwe kunherera nevanhu vavakakomberedzwa.
Asi pakupera kwechikamu chekutanga, iyo anime inotora U-kutendeuka uye inopwanya yako ese tarisiro yekuzoona kuguma kunofadza kweye 1 hunhu kana imwe.
Kunze kweichi chokwadi chekuti Attack PaTitan inoitirwa zvisikwa zvevanhu zvakasarudzika izvo idya vanhu, zvinhu zvinotyisa zvakafanana.
Iyo zano rakangosiyana zvishoma.
Kekutanga nguva pandakaona Iyo Yakapikirwa Neverland, ndakafunga 1 ndichimhanya nepfungwa dzangu…. iyi anime iri kupa 'Madoka Magica vibes.'
Icho hachisi chinhu kunze kwekunyepedzera (bharanzi rakanaka) raishandiswa kukukwevera mukati. Unogadza zvinhu nenzira yekuti mhedzisiro inosimbiswa kuitika, kunyangwe zvisingaite zvinoita sezvazvichaita.
Mavara akanaka, zviso zvinofara, kunyemwerera uye kusava nemhosva zvakaparadzwa kana ese anime akateedzana atanga kuwana CHOKWADI. Kukuratidza iwe rima divi reiyo yega anime iri kuyedza kuratidza.
Saizvozvowo kuna Higurashi, Shiki zvese zvine chekuita nemusha ndizvo akatukwa nerudzi rwechisikwa chinonzi 'Shiki'.
Hapana anoziva kuti sei uye sei, asi ivo vanotanga kuratidzira muhuwandu hukuru, zvichiita kuti vagari vemo vaneta uye vanetswe nehunhu hwavo.
Shiki anotora nguva yakareba kuti awane 'zvakakomba' uye kudonhedza bhomba, iro rakapesana neanime senge Iyo Yakapikirwa Neverland.
Asi kana zvangoitika, haungakwanise kutendeuka kana kusiya iyo anime akateedzana. Iwe wakanyanyisa kudzika mune mavara uye nyaya panguva iyoyo.
8. Yakagadzirwa Mugomba rakadzikadzika
Yakagadzirwa Mugomba rakadzika-dzika iri padyo nepamba kune vateveri ve Iyo Yakapikirwa Neverland.
Chikamu chekutanga chinoburitsa hachina kunyanya kuvhundutsa kana kupenga pakuenzanisa. Asi izvo zvese zviri zviviri anime zvinoita zvakanaka kukutora iwe kuburikidza nechimwe nechimwe chiitiko, uchizarura 'zvakaringana' kukuita iwe kuti ude kuziva zvimwe.
Kunyanya iyo huru cast yeiyi anime nzvimbo yakatenderedza vana.
Kufambira mberi kwaunoita neMade Mugomba rakadzika-dzika, zvakashata uye zvine hutsinye zvinotanga kuve zveavo mavara.
9. Kabaneri WeNhare Yesimbi
Kabaneri WeIron Fortress inogovera zvakawanda zvakafanana ne:
Kunge ese 3 anime anoratidza, chikamu chekutanga chinoita chihombe kubva 'chii' kutarisira kana ukasarudza kuramba uchitarisa.
Zvakaipisisa zvinoitika kune Ikoma kumusha (mutambi mukuru) uye munhu wese anomanikidzwa kuenda nechitima. Pasina nguva refu yapinda mukati 'Kabane', chisikwa chakafanana ne zombie.
Iwe hausi kuzowana zvakafanana zvakawanda pano zvichienzaniswa nemamwe anime pane ino runyorwa, asi dingindira rinozivikanwa zvakakwana kuti unakirwe naro.
Imwe nzira Inoratidza Kune Vakavimbiswa Neverland:
Alice & Zouroku.
Yakaratidzwa mufananidzo sosi: Emma Kubva kune Akavimbiswa Neverland
Kana Iwe Uchida Kuona Anime Hunhu Nebvudzi Dema, Heano makumi matatu nematatu EZVAKANAKA
11 YeIye Mukurusa Anime Inoratidza Senge Ngirozi Dzerufu
pamusoro anime anoratidza ese nguva
yakanyanya kuyerwa anime nguva dzese